🥇 ▷ Hadalku wuxuu bilaabmayaa: Midabada martiqaadku ma yihiin "iPhone 11R" ee soo socda? ✅
Hadalku wuxuu bilaabmayaa: Midabada martiqaadku ma yihiin “iPhone 11R” ee soo socda?
Dhowr daqiiqo ka hor waxaan helnay casuumaad rasmi ah furitaankii Sebtember 10 oo aan si hubaal ah u arki doonno iPhoneka cusub, waxaana jira kuwa horay u arkay xitaa faahfaahinta ugu lama huraanka ah. Midkood waa midabada tufaaxa ay kujiraan casuumadda.
Midabadaasi waxay noqon karaan, sida qaar loo sharaxay, midabada tirada “iPhone 11R”. Waa midabada cagaarka, buluugga, jaalaha, casaanka iyo guduudka; kaladuwanaansho aad u lamid ah kii horey uga soo muuqday hadaladii hore marka laga reebo midabka buluuga ah. Marka loo eego midabada madow iyo caddaanka sidoo kale waxay noqon karaan, laakiin waxaa laga yaabaa Apple inuusan ku darin qaabeynta casuumaadda sabab macquul ah oo qurxoon.
Miyaan dib ugu noqonnaa qaansoroobaad?
Waxaad u maleyn kartaa inay midabadaasi yihiin wax aan ka ahayn muuqaal ah kuwa ku jira astaanta hore ee Apple, laakiin taa ma ahan. Midabada astaantaas ayaa lamid ah, laakiin waxay ku kala sugan yihiin nidaam kale:
Waan ognahay in Apple ay ka taxaddarto dhammaan faahfaahinteeda, sidaa darteed ma la yaabineyno wax kasta oo ay runtii tani tahay tilmaan dhab ah oo ah waxa aan arki karno. Waxaana jira gabal kale oo ku habboon: waxaa sidoo kale jira warar xan ah oo sheeganaya taas in astaanta midabkeedu badanyahay soo noqon karo. Waxaa ka harsan 12 maalmood furaha furaha.
Wadaagista Wadaagida ayaa bilaabaysa: Midabada martiqaadku ma yihiin “iPhone 11R” ee soo socda?